डिजिटल युगमा युवा नेतृत्वका चुनौतीहरु - Choicekhabar.com
Choicekhabar । २०७८ असार १३, आईतवार ०९:५७ मा प्रकाशित
युवा नेतृत्वले आजको दुनियाँमा नेतृत्व विकासको लागि के के गर्नु पर्ला ? पहिलो काम हो विचारको विकास । दृष्टिकोणको निर्माण । नेतृत्वले मूलतः नीतिको अगुवाई गर्ने हो । कस्तो नीति सही नीति हो भन्ने त थाहा हुन पर्यो नि । नेतृत्वले समयको पदचाप बुझ्नु पर्दछ ,र अगाडी अगाडी हिड्नु पर्दछ । जनता सँगसँगै तर अगाडी । जस्तो अहिले हामी डिजिटल युगमा छौँ । प्रविधिले मान्छेलाई विस्थापित गरिरहेको छ । कामको अन्त्य भइरहेको छ । रोबोटले विरामीको सल्यक्रिया गर्दछ, घरको नक्शा बनाउछ, बारीमा खेतिपाती गर्दछ, विद्यार्थीहरुलाई पढाउछ, कारखानामा जुत्ता उत्पादन गर्छ । डाक्टर, इञ्जिनियर, किसान, शिक्षक र मजदुरलाई विस्थापित गरिरहेको छ । यसप्रति पीठ फर्काएर र ओठ लेब्य्राएर हिड्ने मान्छे मैले देखेको र भेटेको छु ।
अँ यस्तो त हुँदै गर्छ भन्ने । हुलाक कहाँ गयो आजकाल ? के कसैले आराम छु आराम चहान्छु भनेर चिट्ठी लेखिरहेको छ ?इमेलले हुलाकलाई सर्लक्कै निलिसक्यो । इमेल उम्दा अवस्थामा छ भने हुलाक मृत्युको दिन गनेर बसिरहेको छ । ट्याक्टरले गोरु, राँगा र घोडाले जोत्ने खेतको हलो, फाली र जुवा उप्काउदै लगिरहेको छ ।तेलमिलले कोल र कुटानी मिलले पानी घट्ट निल्दै गइरहेको छ । कुनै दिन आउनेवाला छ , काँसको बञ्चरो, हाते चर्खा, हुलाक, हलो, कोल र घट्ट एकै ठाँउमा भेटिने वाला छन् अर्थात् संग्राहलयमा । अरु के के थन्कने छन् संग्राहलयमा हामीले सूचि बनाएका छौं ? अहिले सम्म वस्तु मात्रै थन्किएका थिए, अब मान्छेको पेशा पनि थन्कियो भने ? यही हो कामको अन्त्य भनेको ।के परिणाम आउला ?अकल्पनिय ।जिवाश्मा इन्धनको युग समाप्त हुँदैछ र नविकरणीय उर्जाको युग शुरु हुँदैछ । उर्जामा हुने क्रान्तिका बारेमा हाम्रोमा खासै बहश भएकै छैन । निःशुल्क उर्जाको परिणाम के होला ?
सात अर्ब नब्बे करोड मान्छेलाई एउटै सञ्जालमा जोड्ने काम गरेको छ इन्टरनेटले । सञ्चार आज लगभग निःशुल्क भएको छ संसारभर । मानव जातीले यस्तो प्रयोग पहिलो पटक गर्दैछ । दुई अर्ब विद्यार्थीहरुको एउटै कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ ।भर्चुअल माध्यमले । अरबाँै किताबहरुको पसल त नेटमा थापिएकै छ । गुगल जस्तो खोजी माध्यमले जे खोज्यो त्यो क्षणभरमै फेला पारेर चाहिएको नतिजा हामीलाई दिन थालेको धेरै भइसक्यो । यु ट्युब च्यानलले हामीलाई भिडियोहरु सजिलै र निशुल्क उपलब्ध गराइरहेकै छ ।सञ्चारको पाँचौँ पुस्ता जसलाई फाइभ जी भनेर चिनिन्छ, भूउपग्रह मार्फत् निःशुल्क र तीव्र गतिमा पृथ्वीका सबै मान्छेले प्रयोग गर्दा हुने परिणामको आँकलन हामीले गरेका छैनौँ । यही दशकमा संसारको प्रत्येक घरमा कम्तिमा एक दर्जन सेन्सरहरुले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने छन् ।
सि जिन पिंले चीनीयाँ भाषामाबोल्दा जो बाइडेनले अंग्रजीमा त अहिले पनि सुनिरहेकै छन् । न दोभाषे चाहिन्छ न उल्था गर्ने मान्छे । गुगलमा किताबहरु उल्था सजिलै हुने गरेको छ । चश्मा वा क्यामेराले अनुहारको अध्ययन गरेर कुन देशको नागरिक हो पत्ता लगाउन कठिन भएन । सामाजिक सञ्जाल हाम्रो ठूलो सञ्चारको माध्यम भएको छ । हिमाल, पहाड, समुन्द्रले हाम्रो यात्रा रोक्न सकेको छैन । एक घण्टामा पृथ्वीको फन्को मार्ने अवस्था हँुदैछ कुनै दिन त्यो पनि सजिलै टिकट काटेर । यानमा ।हेलिकप्टरलाई विस्थापित गर्ने उड्ने गाडीहरु जो निर्माणाधिन अवस्थाम छन् । हिजो मोबाइल फोन संभ्रान्त वर्गको पेवा जस्तो थियो आज आम मान्छेको हातहातमा छ, निकट भोली उड्ने गाडी हामी प्रत्येकको दैलोमा खडा हुनेछ । आजको मोबाइलफोन प्रत्येकको खल्तिमा भए जस्तै गरी ।
वस्तुहरु र मान्छेहरु इन्टरनेटमा जोडिन थालेका मात्रै होइनन् डिजिटल वस्तुहरु पनि बनेकै छन् , जस्तो डिजिटल मुद्रा । डिजिटल उपचार पद्धति, डिजिटल पढाई, डिजिटल व्यापार सबका सब । युवा नेतृत्व आजको दुनियाँका बारेमा कम्तिमा सैद्धान्तिक रुपमै भएपनि जानकार हुनैपर्दछ । ज्ञानमा आएको तीव्र बदलावले दश वर्ष पढेर जिन्दगीभर धान्ने जमाना समाप्त भयो । अब ज्ञानलाई क्षण क्षणमा नविकरण नगर्ने हो भने विस्थापित हुने संभावना प्रबल हुन्छ । नेतृत्वका लागि इच्छा राख्नु एउटा कुरा हो तर वास्तविक नेतृत्व गर्नु अर्को कुरा हो ।संक्षेपमा, डिजिटल युगको नेतृत्व डिजिटल युगको चेतनाले मात्रै हुन सक्दछ । त्यस्तो नेतृत्व एकल चेतनाले संभव छैन । सामूहिक नेतृत्व प्रणाली वस्तुगत आवश्कता बनेको छ र संभव पनि । जंगली युगमा शिकारीको सानो समूहको अगुवाई गरे पुग्थ्यो । कृषि कार्य विकेन्द्रीत भएकोले नेतृत्व विकेन्द्रीत थियो । औद्योगिक युगमा सयौँ वा हजारौँ मजदुरहरुलाई एकैसाथ नेतृत्व गर्न केन्द्रीकृत प्रणाली आवश्यक थियो ।